CEO Wizz Air Jozsef Varadi: Sarotra be ny fiainana ankehitriny
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » CEO Wizz Air Jozsef Varadi: Sarotra be ny fiainana ankehitriny
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao Momba ny Hongria • Interviews • Vaovao • fanorenana • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
CEO an'ny Wizz Air
Ny filoha Emeritus, avy amin'ny CAPA - Centre for Aviation, Peter Harbison, dia nanararaotra nipetraka ary niresaka tamin'ny tale jeneralin'ny Wizz Air, Jozsef Varadi, tato ho ato. Niara-nijery ny sary lehibe sy ny olana lehibe eo izy ireo.
Rehefa mety ny toe-javatra, hiverina amin'ny rivotra ny mpanjifa, ny fepetra dia ny fahatsapana ny filaminana.
Ireo mpandeha vita vaksiny, azo inoana fa hahatsapa ho voaro amin'ny sidina indray raha mbola tsy misy fameperana apetraky ny governemanta amin'ny dia.
Raha manamaivana ny fameperana ny firenena sasany, ny sasany kosa dia tena manery mafy ny fivezivezena, noho izany dia mbola toe-javatra tsy dia ampoizina sy miovaova be izy io.
Peter Harbison dia nanomboka ny resadresaka tamin'ny fandraisana an'i József Váradi, izay CEO an'ny Wizz Air. Nanoro hevitra i Peter fa hanomboka ny fifanakalozan-kevitr'izy ireo amin'ny sary lehibe izy ireo.
Ny resadresaka dia natomboka tamin'ny CEO Wizz izay nanolotra topy maso an'i Eropa sy ny areti-mandringana COVID-19 amin'ny ankapobeny. Niady hevitra momba ny olana lehibe tamin'i Peter of izy CAPA - Ivotoerana fiaramanidina rehefa hitany fa ho avy ao anatin'ny 3 volana ho avy izay tsy maintsy hatrehin'i Wizz Air.
Tongasoa fatratra. Tsy mbola niresaka taminao elaela, József, fa be ny zavatra nitranga nandritra izany fotoana izany. Andao hiroso amin'ny sary lehibe, ary inona ireo olana lehibe hitanao fa ho tonga ao anatin'ny telo volana?
Misaotra, Peter, nanasa ahy ny fampisehoana nataonao. Raha mijery ny fiainana anio aho dia mieritreritra fa sarotra be izany. Azo antoka fa mila mijery mpanjifa ianao, na te-hanidina ny mpanjifa na tsia. Mazava ho azy fa te-hanidina ny mpanjifa, tsy misy maharatsy ny mpanjifa. Afaka mahita ny sasany amin'ireo tsena ianao, [tsy henoina 00:00:56] dia tena manatratra tokoa. Heveriko fa amin'izao fotoana izao dia mahavita manodidina ny 80% ny haavon'ny fahaizany 2019. Antenaina hihoatra ny fahafaha-manao fahavaratra lehibe amin'ny taona 2019. Heveriko fa ny tena lazainy aminao dia rehefa mety ny fepetra dia miverina eny amin'ny habakabaka ny mpanjifa, amin'ny zotram-piaramanidina tena haingana ary tena misy tokoa ny fepetra. ny fahatsapana ny filaminana. Raha vita vaksiny ianao, mieritreritra aho fa mahatsiaro ho voaro amin'ny sidina indray ianao ary roa, tsy misy fameperana apetraky ny governemanta amin'ny dia, ka afaka mandeha mora ianao.
Saingy tsy tena mihatra izany Eropa amin'izao fotoana ara-potoana izao. Mihevitra aho fa eo ny fahavononan'ilay mpanjifa manidina, tsy miovaova izany. Raha ny tena izy, maro amin'ireo olona no leo amin'ny hidim-baravarana ary te-handeha, te hiaina rivotra madio izy ireo nefa miaraka amin'izay dia voafehin'ny fameperana ataon'ny governemanta izy ireo.
Ary amin'ny tranga sasany, dia saika tsy azo atao ny mivezivezy. Miova miadana izy izao, fa tsy tsipika mahitsy. Mitovy kokoa amin'ny coaster roller izany. Hitanareo ny firenena sasany manalefaka ny fameperana, nefa mbola mahita firenena sasany manery ny fameperana ihany ianao ankehitriny, ka heveriko fa mbola tena tsy azo vinavinaina, tena miovaova io ary ho hitantsika ny fandehany. Tena azonay, heveriko fa tsy any amin'ny ambaratonga Etazonia i Eropa, azo antoka fa tsy avy amin'ny fomba fijery anatiny. Mbola sarotra io.
Ie. Heveriko fa somary sarotra ny fampitahana amin'i Etazonia satria io angamba no tsena tokana niverina tamin'io haavo io, afa-tsy i Shina. Fa ny iray amin'ireo zavatra ireo, József, na any Etazonia aza dia miverina amin'ny sidina feno izy ireo ary mazava ho azy fa be ny fangatahana ao, miverina manakaiky ny haavon'ny 2019, ny vokatra dia mbola ambany be ihany. Mbola midina 20, 30 isan-jato eo ho eo ny vokatra ara-toekarena. Inona no mitondra izany? Moa ve ny fahafaha-manao be loatra tonga haingana loatra sa ny tsy fahazoana antoka eo amin'ny fitantanana ny vola miditra?
Heveriko fa ny tantaran'ny indostria dia, indrindra raha ny fanarenana amin'ny toe-javatra sarotra izay mihoatra ny fahaiza-manao ary araka ny nolazaiko fa sarotra izany noho ny tsy fifandanjana eo amin'ny famatsiana sy ny fangatahana, hitanao ny tontolo manodidina ny vokatra ary izaho eritrereto fa izao no tokony antenainao. Olona tsara eran'izao tontolo izao fa amin'ny dingana fanarenana, izany dia ny fahafaha-mivoaka be loatra eny an-tsena, izay mety ho zavatra mety amin'ny fampiroboroboana ny fifamoivoizana sy famporisihana ny mpanjifa hiverina amin'ny sidina. Saingy mandritra izany fotoana izany, raha ny fahitana ara-bola sy taloha dia mazava ho azy fa hanery ny indostria io.
LGBTQ eran-tany + Andro fitsangantsanganana Italiana style